share | Mg Ogga's Notes
နှစ်သစ်မှာ ကျနော်ဘလော့ဖတ်တဲ့သူတွေကို နှစ်သစ်မှာဘာလက်ဆောင်ပေးရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားတယ် အမေကိုမနေ.ကပဲ ကတိသုံးခုပေးခဲ့ရတယ်။ ၁။လူများရဲ့ကျေးဇူးကိုမြင်ဖို. ၂။ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ဖို. ၃။ဘာသာရေးပိုလုပ်ဖို. ဒါတွေကိုအမေကိုလုပ်ပါမယ် လိုကတိပေးလိုက်ရတယ်။ ဒီအချက်၃ချက်မှာ ကျနော်အတွက် အခက်ဆုံးက နံပါတ်တစ်အချက်ဖြစ်တဲ့လူအများရဲ့ကျေးဇူးကို မြင်ဖို.ပဲ။ကျနော်ငယ်ငယ် ကတည်းကဖတ်တဲ့စာကလက်ဝဲစာတွေများတယ်ချမ်းသာတဲ့သူဆိုရင်မုန်းတယ်လူတကာကို ဖောက်ပြန်တယ်ပဲမြင်နေတတ်တယ်လူတွေနဲ့အမြဲအဆင်မပြေဘူး။ကျနော်ကြည့်လိုရတဲ့လူ ရှားတယ်။ ဒါကြောင့်ဘယ်သူနဲ့မှမတည့်ဘူး အခုတော့အမေကိုကတိပေးပြီးသွားတော့ တည်အောင် လုပ်ရမှာပေါ့။ Advertisements
April 17, 2009 in ဆောင်းပါး.
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေးနဲ.ပက်သက်သည် ၀က်ဆိုဒ်သစ်ကို ပါရမီစာပေ ကကိုကျော်ဦးက ရေးသားထားပြီ ကမ္ဘာရာသီ ဥတုပြောင်းလဲခြင်းအောကာင်း ဘက်ပေါင်းစုံက မြန်မာဘာသာနဲ. တင်ပြထားတယ် ကြည်ချင်ရင်ဒီမှာကြည်.ပါ
January 28, 2009 in သတင်း.